Zaadka oo Kaalinta Koowaad Kaga Jira Hoos u Dhaca Dhaqaale ee Dalkeena iyo Mooganaanta Dhibkiisa ee Shacabka.Prof: Mursal Abdillahi | Wajaale.com
18 October 2016 | Articles
Zaadka oo Kaalinta Koowaad Kaga Jira Hoos u Dhaca Dhaqaale ee Dalkeena iyo Mooganaanta Dhibkiisa ee Shacabka.Prof: Mursal Abdillahi
Waxaan jeclaystay anigoo ah muwaadin bartay cilmiga dhaqaalaha gaar ahaan ku takhasusay aqoonta bangiyada islaamiga ah in aan soo bandhigo daraasad aan ku sameeyay adeega zaadka.
Si aan u daah furo daraasadan waxaan iswaydiiyay su’aalo dhawr ah oo ay ka mid yihiin.
1.Zaadku ma u danbaa dhaqaalaha dalkeena?
2.Dhib intee leeg ayuu ku hayaa dhaqaalaha dalkeena iyo hantida shacabka?
Sharci ahaan maxaa xaq loogu leeyahay shirkada telesom ee bixisa adeega zaad?
4.Intee inleeg ayay ka faa’idaa shirkada telesom?
5.Xaq ma u leedahay sharci ahaan inay isticmaasho lacagta zaad ugu jirta muwaadiniinta isticmaalaya?
6.Maxaa damaanad ah hadii adeegu khalkhalo?
Maxaa xidhiidh ka dhaxayn kara bangiyada islaamka iyo shirkad isgaadhsiineed?
Hadaba daraasadan aan ku sameeyay adeegaas muda badana qaadatay ayaa waxaan jeclaystay inaan usoo bandhigo cidkastoo ay khusayso in ay waajib ku tahay badbaadinta dhaqaalaha dalkena iyo hantida qaranka oo ay ugu horayso xukuumada somaliland.
Hadii aan ku bilaabo sababta igu kaliftay inaan daraasadan sameeyo, waxaan adeega zaad furtay bishii septemper 2009, markii aan buuxiyay shuruudihii xagayga ku xidhnaa kuna heli lahaa isticmaalka adeegan ayaa waxaan su’aalay maxaa damanad ah ama heshiis ah ee dhinaca shirkada aan ka helayaa, waxa uu inankii shaqaalaha ahaa ee ii furayay adeegan ii daabacay waraaq ay ku qoranyihiin dhawr heshiis oo ay shirkadu ugu talo gashay in ay siiyaan muwaadiniinta furanaya adeegan.
Waxaa ka mid ahaa in la ii furay adeega zaad, in shirkada telesom isticmaali karto lacagta iigu jirta adeega zaad markaan doonana aan heli karo sida ay u isticmaalaan bangiyada islaamiga ahi.
Waxaan hadana su’aalay inuu ii sharaxo adeegan sida ay telesom u isticmaali karto lacagtayda oo ay tusaale usoo qaateen sida uu bangiyada islaamku u isticmaalaan, balse nasiib daro inankaasi wuu I qancin kari waayay inuu ka jawaabo su’aalahayga, inkasta oo aanan la yaabin jawaabtiisa oo aan u fahmay in isagu uu shaqaale yahay lana faray inta uu ii sheegay aqoon dheeraad ahna u lahayn inuu iga qanciyo su’aalahayga.
Maalintaas wixii ka danbeeyay waxaan bilaabay inaan daraasadeeyo adeegan iyo muhiimada uu u leeyahay dhaqaalaha wadankeena.
Muwaadin hadii aan jawaabo ka bixiyo su’aalaha aan daraasada ku sameeyay aniga oo aan maqaalkan kusoo koobi karayn oo ka dhigi doona taxane waxaan ku bilaabayaa sidan soosocota.
1.zaadku ma u danbaa dhaqaalaha wadankeena? Waxa iisoo baxday jawaab ah inaan wax dan ah u ahayn dhaqaalaha dalkeena anigoo ku sababeeyay hab dhaqanka uu adeegani u shaqeeyo. Sharci ahaan wixii la xadhiidha lacag waxa masuul ka ah bangiga dhexe ee dalkastaa leeyahay, hadaba waxa la yaab ah in bangiga dhexe isticmaalin masuuliyadii qaranimo ee dastuurku siiyay.
2.dhib intee leeg ayuu ku hayaa dhaqaalaha dalkeena adeega zaadku ?
Telesom waxa ay subaxkasta inaga qaadaa lacag bilaash ah oo aanay waxba inagaga iibsan iyadoo inoogu bedesha number lagu sameeyay software. Tusaale ahaan hadii ay iibsadaan software daabici kara 1,000,000,000$ ah waxa laga yaabaa iyaka qiimaha uu ku taaganyahay in aanu ka badnayn softwarekaasi 10,000$ waxa ayna inaga helaan lacagtaas cadadkeedu baaxadaas leeyahay oo aan waxba la inagaga badalan. Maxaa dhib ah ee ku jira dhinaca dhaqaalaha waxa suuqa halmar soo wada galaya 100$ oo sax ah iyo 100$ oo fake ah, taasoo sababtay in uu dhaco sixir barar balaadhan in uu ku dhaco dhaqaalaha dalkeena, iyadoo masuuliyadana ay leeyihiin shirkada telesom iyo bangiga dhexe.
3.sharci ahaan maxaa xaq loogu leeyahay shirkada telesom?
Waxa xaq loogu leeyahay ka qaran ahaan in ay bangiga dhexe dhigaan lacag cadadkeedu dhanyahay hadaba qadarka lacageed ee ay ku iibsadaan softwareka samaynaya adeega zaadka, si aanay u dhicin sixir bararka dhaqaale ee ay keenayso labada lacagood ee suuqa soo wada galaya, dhinaca muwaadinkana ay ugu noqoto damaanad hadii ay shirkadu xidhanto ama ay kacdo hadba sida aad u taqaanid.
Muwaadin lasoco taxanaha maqaalkan oo aan kusoo bandhigi doona xisaab ahaan daraasadan oo ay hadhsan tahay intii ugu nuxurka badnayd.
Xasuusin waxaan daraasadayda aan labaad kusoo bandhigi doonaa cashuurta ku jawaabtay ganacsiyada dalka iyo dhaqaale la’aanta baahsan ee qaranka.
Qalinkii: Prof: Mursal Abdillahi Ismail